I-china Isikhwama se-Duffle Abahlinzeki - Isitolo esidayisa yonke impahla kanye nesikhwama se-Duffle Sesaphulelo - I-Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Isikhwama se-Duffle
Izindiza zasekhaya: abagibeli abaphethe amathikithi ekilasi lokuqala bavunyelwe izingcezu ezimbili zemithwalo kumuntu ngamunye, abagibeli abaphethe isigaba sebhizinisi kanye namathikithi ezomnotho bavunyelwe ucezu olulodwa lwemithwalo yomuntu ngamunye. 20 × 40 × 55 cm. Isisindo esiphelele sezinto ezimbili ezingenhla singeqi ku-5 kg. Indiza yomhlaba wonke: isiqeshana ngasinye semithwalo asidluli ku-20 × 40 × 55 cm, isisindo esiphelele semithwalo yesandla asidluli ku-7 kg Ngokujwayelekile, kudingeka kuhlolwe.
Isikhwama se-Duffel sabesilisa
Izindiza zasekhaya: abagibeli abaphethe amathikithi ekilasi lokuqala bavunyelwe izingcezu ezimbili zemithwalo kumuntu ngamunye, abagibeli abaphethe isigaba sebhizinisi namathikithi ezomnotho bavunyelwe ucezu olulodwa lomthwalo ngamunye. 20 × 40 × 55 cm. Isisindo esiphelele sezinto ezimbili ezingenhla singeqi ku-5 kg. Indiza yamazwe omhlaba: isiqeshana ngasinye somthwalo asidluli ku-20 × 40 × 55 cm, isisindo esiphelele semithwalo yesandla asidluli ku-7 kg. Ngokujwayelekile, kudingeka kuhlolwe.
Izesekeli: 2 amabhande wamamitha ama-3 ubude wokuqinisa ngamabhakede aphindwe kabili, isikhwama 1 esikhethekile sokugcina indwangu se-Oxford
Isikhwama se-duffel esinamasondo
Izikhwama ze-duffel ezinamasondo: Akukho okufana nesikhwama se-duffel sokugwinya amagiya, futhi izikhwama ze-duffel ezinamasondo zilungele isihambi semidlalo eminingi. Imishini yokupakisha elula, amabhokisi ahamba ngamasondo anikeza indawo encane, kepha konga isikhathi nezindleko zokuhlola umthwalo wakho. mayelana nezinketho ze-rack, funda imininingwane elandelayo mayelana ne-rack.
Hlukanisa izicathulo nezicucu: Lesi sikhwama sokuzivocavoca esinegumbi lezicathulo singena umoya ukwehlukanisa izicathulo negiya elingcolile kusuka ezintweni ezihlanzekile.Kukhona nesikhwama esengeziwe esingenamanzi sokugcina izinto ezimanzi, ikakhulukazi amathawula amanzi noma amaphakethe amasudi okugeza, alula kakhulu futhi kulula ukuyihlanza.